Nandefa fiarahabana ho an'i Kanada sy ny Repoblika Demokratikan'i Kongo i Etazonia.
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nandefa fiarahabana ho an'i Kanada sy ny Repoblika Demokratikan'i Kongo i Etazonia.
Ny sekreteram-panjakana amerikana dia namoaka ity fanambarana roa manaraka ity amin'ny anaran'ny Governemanta amerikana amerikana.
Manolotra ny fiarahabana feno fatratra an'i Kanada aho rehefa mankalazae Kanada Day amin'ny 1 Jolay.
Etazonia sy Kanada dia mizara iray amin'ireo fiaraha-miasa mahomby indrindra eo amin'ny firenena roa tonta manerantany. Faly izahay miara-miasa amin'i Canada hampiroborobo ny demokrasia, zon'olombelona, ​​ary fanajana ny lalàna mifehy ny tany. Izahay dia mizara ny fifandraisana varotra lehibe indrindra sy mavitrika indrindra eto an-tany izay manohana asa an-tapitrisany any amin'ny firenentsika roa. Miara-miasa akaiky izahay amin'ny fanitarana ny fitomboana sy ny fahafaha-manao amin'ny faritra. Ny ezaka ataontsika hiadiana amin'ny fampihorohoroana, hamaly ny krizy mahaolona, ​​ary hisorohana ny fanondranana zava-mahadomelina eran-tany sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona dia miaro tsy ny olom-pirenentsika ihany fa ny olona marefo manerantany. Izahay, mpiara-miasa, hampandroso ny fahalalana siantifika ary hampivelatra ny teknolojia vaovao amin'ny alàlan'ny fikarohana miaraka sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny habakabaka izay hanatsara ny fiainantsika.
Amin'ny Andron'i Kanada, dia miaraka amin'ireo namantsika sy mpiara-monina Kanadiana izahay hankalaza ny faha-152 taonan'ny Confederation.
Amin'ny anaran'ny Etazonia dia mandefa firarian-tsoa mafana ho an'ny mponin'i Repoblika Demokratikan'i Congo rehefa mankalaza ny 59 ianaoth fitsingerenan'ny fahaleovantenanao.
Ny fifamindram-pahefana farany teo dia manan-tantara, ary anio dia miarahaba ny fanoloran-tenanareo izahay amin'ny fananganana ho avy tsaratsara kokoa sy milamina ary miroborobo kokoa ho an'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo. Ankafizinay ity fotoana nohavaozina ity hanamafisana ny fifandraisana misy eo amin'ny firenentsika roa amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa Tombontsoa ho an'ny fandriampahalemana sy ny fanambinana, izay mifantoka amin'ny fanatsarana ny fitantanana, hampiroborobo ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana, ny ady amin'ny kolikoly, ny fampandrosoana ny zon'olombelona, ​​ary ny famoronana fepetra hampitomboana ny fampiasam-bola any Etazonia sy ny fitomboana ara-toekarena.
Mpiasa Serena Hotel ao Oganda no nilaza fa nisy nanararaotra ary nitokona
Tatitra: fampandrosoana ny rindrambaiko 737 MAX an'ny Boeing ho an'ny mpiorina $ 9 / ora